MX-19.4: သင်ပြီးပြီ ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့သတင်းတွေပေးတယ် Linux မှ
MX-19.4: သင်ပြီးပြီ ဒါက 01/04/21 ကနေကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံး ၀ င်တဲ့သတင်းတွေပေးတယ်
မနေ့က, 01 ဧပြီလ 2021လူသိများတဲ့ GNU / Linux Distro ခေါ်ဆိုခ «MX » အရာနေဆဲကနေအောက်ပါအတိုင်း primera အဆိုပါအကြား DistroWatch အကြိုက်ဆုံးများ, နံပါတ်အောက်တွင်ရရှိနိုင်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြန့်ချိခဲ့သည် «19.4».
ထို့ကြောင့်တွေးတောဆင်ခြင်ရန်ယုတ္တိရှိသည်အတိုင်း «MX-19.4» ၎င်း၏လက်ရှိစီးရီး၏စတုတ္ထ update ကိုဖြစ်ပါတယ် «MX-19»။ နောက်မှတွေ့ရလိမ့်မယ် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် updates များကို သူတို့ရဲ့မူရင်းဗားရှင်းမှလာအမျိုးမျိုးသောအခြေခံနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော applications များ «MX-19», ဒါပေမယ့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောသတင်း။
ဗားရှင်းအသစ်၏သတင်းများကိုအပြည့်အဝမထည့်သွင်းမီ «MX-19.4 »အရင်စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင့်ခ်အချို့ကိုဒီမှာထားခဲ့ပါမယ် «MX » ချမ်းသာအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုမို delving စိတ်ဝင်စားသူတို့အားသည် GNU / Linux Distro.
"MX ကမင်းပါna Distro GNU / Linux သည် antiX နှင့် MX Linux အသိုင်းအဝိုင်းများအကြားပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြော့ရှင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Operating Systems ၏မိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများသည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ Live USB နှင့် antiX မှထုတ်ယူလိုက်သောလျှပ်တစ်ပြက်ကိရိယာများသည်အထင်ကြီးလောက်သောသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်မြှင့်စွမ်းရည်များထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဗီဒီယိုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဖိုရမ်များမှတဆင့်များပြားစွာသောအထောက်အပံ့များရှိသည်။".
1 MX Linux - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ fromပြီလမှရရှိသောဗားရှင်း ၁၉.၄
1.1 MX ဗားရှင်း ၁၉.၄ မှာဘာအသစ်လဲ
1.2 MX Linux ကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ။
MX Linux - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ fromပြီလမှရရှိသောဗားရှင်း ၁၉.၄
MX ဗားရှင်း ၁၉.၄ မှာဘာအသစ်လဲ
၎င်း၏ developer များကသက်ဆိုင်ရာအတွက်ကြေငြာသောအသစ်အဆန်းများထဲမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း သင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်း တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါကိုဖော်ပြပါ -
အဆင့်မြှင့်တင်မှုလွယ်ကူခြင်းရိုးရှင်းသောနှင့်အတူ console ကတဆင့် «အဆင့်မြှင့်တင်ရန်» ၏ယခင်ဗားရှင်းကနေ «MX-19 ».
ရရှိနိုင်သော ISO အသစ်များ:
32 bit ISO XFCE နှင့်နှင့် Debian kernel ကိုစံ 4.19 နှင့်အတူ Fluxbox
64 bit ISO XFCE နှင့်နှင့် Debian kernel ကိုစံ 4.19 နှင့်အတူ Fluxbox
XFCE ပါသော 64 bit ISO နှင့် AHS 5.10 kernel ပါသည့် Fluxbox
Kernel AHS 64 kernel ပါသော KDE Plasma ဖြင့် 5.10 bit ISO
ဇယား ၁၈.၃.၆ (AHS ထုတ်ဝေမှု ၂၀.၃.၄)
နောက်ဆုံးပေါ် debian kernel 4.19 (AHS edition အတွက် ၅.၁၀)
ဗီဒီယို Player: VLC 3.0.12
ဂီတမန်နေဂျာ: ကလီမန်တိုင်း ၁.၃.၁
အီးမေးလ်ဂလိုင်း: Thunderbird 68.12.0
အောက်ပါ ရုံးသုံးအလိုအလျောက် - LibreOffice 6.1.5 (ပေါင်းလုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများ)
"Standard MX-19.4 (32-bit နှင့် 64-bit) တွင်နောက်ဆုံးပေါ် debian 4.19 kernel ပါဝင်သည်။ AHS (Advanced Hardware Support) iso တွင် debian 5.10.24 kernel, 20.3 table updates နှင့်အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော firmware packages များပါရှိသည်။ KDE iso ကိုလည်း update လုပ်ပြီး AHS-based ဖြစ်ပြီး 5.10.24 kernel နှင့် updated mesa နှင့် firmware packages များပါရှိသည်။ ထုံးစံအတိုင်း, ဒီလွှတ်ပေးရန်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် debian 10.6 (buster) updates များနှင့် MX repositories ပါဝင်သည်". MX-19.4 ထွက်ပြီ
MX Linux ကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါလက်ရှိအသုံးပြုသည် «MX-19 » ဗားရှင်းရရှိနိုင်ကတည်းကငါကသုံးပါ «MX-17.1 »။ များသောအားဖြင့်လူအများကမကြာခဏတွေးမိပြီးမေးကြသည်: အဘယ်ကြောင့် "MX" ကဲ့သို့သော Distro ကိုသုံးပါ? ဤသည်မှာများစွာသောလူများကြားတွင်အပေါ့ဆုံးရရှိနိုင်ဆုံးနှင့်အလှပဆုံးအရာမဟုတ်ကြောင်း၊ စကားမစပ်သည်၎င်း၏လက်ရှိကုဒ်နံပါတ်နှင့်အညီနေထိုင်သည်။ «အရုပ်ဆိုးဘဲ။ ထို့အပြင်: အဘယ်အရာကဤမျှကာလပတ်လုံး DistroWatch ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေခြင်းကအထူးထူးခြားစေသနည်း။
ဒါတွေအားလုံးပါ ထား6အငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်အားသာချက် ငါဘာကြည့်တာလဲ «MX-19.X » ပိုနှစ်သက်သည်:
၎င်း၏ 64 bit ဗားရှင်းအတွက်အနိမ့်နှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အရင်းအမြစ်များစားသုံးမှု။
32-bit အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်း၊ အဟောင်းသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်နိမ့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
MX မှထုတ်လုပ်ထားသောကိုယ်ပိုင် software အထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Debian GNU / Linux 10 ကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်ပြီးခေတ်မီအုတ်မြစ်ကိုပေးသည်။
၎င်းသည် XboxE, Plasma နှင့် FluxBox အပြင်၊ LXQT, OpenBox, I3wm နှင့် IceWM တို့နှင့်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ Desktop Environments ၏အပိုတပ်ဆင်မှုကိုကောင်းစွာလက်ခံသည်။
၎င်းသည်သင့်အား Respin (live, customizable and installable Snapshot) ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် USB သိုလှောင်ရေးကိရိယာတွင်အသုံးပြုသောအခါအလွန်ကောင်းသည့် persistence capacity ရှိသည်။
မှတ်ချက်ဖြေ - နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟာနာရီပေါင်းများစွာတိုးတက်အောင်၊ ကိုယ်ပိုင်၊ «MX-19.X » ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် Respin တူညီသော၏, ဒါ၏အမှု၌ ဆိုးဝါးသောအမှား ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလေးလုပ်ချင်တယ် ပြန်လည်ထည့်သွင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သတ်မှတ် ကျွန်တော်တို့၏ operating system၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်မိနစ်အနည်းငယ် (ပြန်လည်) သုံးစွဲပြီးအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာရှိရန်လိုအပ်သည်၊ အရာအားလုံးကိုခြစ်ရာမှပြန်လုပ်ခြင်းအတွက်နာရီများစွာ / လုပ်အားကိုချွေတာစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုဇွဲရှိရှိသို့မဟုတ်မပါဘဲ USB သိုလှောင်မှုတစ်ခုတွင်အသုံးပြုပါကမည်သည့်ကွန်ပျူတာဖြင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်စတင်နိုင်သည် «MX-19.X »။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ Respin ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «MX-19.4»ဆိုလိုသည်မှာ နောက်ဆုံး ကနေရရှိနိုင် 01 ဧပြီလ 2021 de la GNU / Linux MX Distro ကြောင်းနေဆဲအောက်ပါအတိုင်း primera အဆိုပါအကြား DistroWatch အကြိုက်ဆုံးများ; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » MX-19.4: သင်ပြီးပြီ ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့သတင်းတွေပေးတယ်
အလုပ်မလုပ်သောပရိုဂရမ်များလည်းရှိပါသည်၊ သင်ထည့်သွင်းပါက၎င်းတို့ကိုသင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်၊ ဥပမာ Butt
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်, Malevoelguapo ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အချို့အက်ပ်များကိုများသောအားဖြင့်အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများ၌ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အားသင်၏ကောင်းသော Hardware နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောအထင်အမြင်မပေးသောကြောင့်အလွန်ကံဆိုးလျှင်၊ ငါ့ထံမှ MX Linux သည်မူရင်းပုံစံနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များတွင်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" beta ကိုယခုဖြန့်ချိသည်